Sidee Mashiinnada Goobiddu u Raadiyaan, u gurguurtaan, oo u muujiyaan Mawduucaaga? | Martech Zone
Had iyo jeer kuguma taliyo in macaamiisha ay dhisaan ecommerce u gaar ah ama nidaamyada maareynta maadooyinka sababtoo ah dhammaan xulashooyinka ballaadhinta aan la arki karin ee loo baahan yahay maalmahan - ugu horreyn diirada la saaray raadinta iyo hagaajinta bulshada. Waxaan ku qoray maqaal sida loo doorto CMS oo wali waxaan tusaa shirkadaha aan la shaqeeyo ee la isku dayayo inay dhisaan nidaamkooda maaraynta maadooyinka.
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira xaalado gabi ahaanba meesha madal caam ah ay lagama maarmaan tahay. Marka taasi ay tahay xalka ugu wanaagsan, wali waxaan ku riixayaa macaamiishayda inay dhisaan astaamaha lagama maarmaanka u ah si loo wanaajiyo goobahooda raadinta iyo warbaahinta bulshada, in kastoo. Asal ahaan waxaa jira saddex astaamood oo muhiim ah oo lagama maarmaan ah.
Waa maxay Faylasha Robots.txt?
Robots.txt faylka - the robots.txt faylka waa feylal qoraal ah oo cad oo kujira galka asalka ee goobta una sheegaya matoorada raadinta waxa ay tahay inay ku daraan kana reebaan natiijooyinka raadinta. Sanadihii la soo dhaafay, makiinadaha raadinta ayaa sidoo kale codsaday in aad ku darto wadada loo maro khariidadda bogga ee 'XML sitemap' oo ku dhex jirta faylka. Waa kuwan tusaalahayga, kaas oo u oggolaanaya dhammaan bootooyinka inay gurguurtaan boggeyga sidoo kalena u jiheeya khariidadeyda bogga XML:
Waa maxay Khariidadda Raadinta ee XML?
Sitemap XML - Sida HTML loogu talagalay in lagu daawado biraawsar, XML waxaa loo qoray in si barnaamij ahaan loo dheefshiido. Khariidadda bogga ee 'XML' ayaa asal ahaan ah miis bog kasta oo ka mid ah boggaaga iyo goortii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay. Khariidadaha bogga ee 'XML' ayaa sidoo kale noqon kara silsilad silsiladaysan… taasi waa hal XML Khariidadda bogga ayaa tixraaci karta mid kale. Taasi way fiicantahay haddii aad rabto inaad abaabulto oo aad u kala jabiso waxyaabaha ku jira bartaada si macquul ah (FAQs, bogagga, alaabada, iwm.) Khariidadooda bogga.
Khariidadaha bogga ayaa lagama maarmaan ah si aad si wax ku ool ah ugu oggolaan karto makiinadaha raadinta inay ogaadaan waxa aad ka kooban tahay ee aad abuurtay iyo markii ugu dambeysay ee wax laga beddelay. Nidaamka mashiinka raadinta uu adeegsado markii aad aadeyso boggaaga waxtar ma leh iyada oo aan la hirgelin khariidadda bogga iyo jeexjeexa.
Iyadoo aan lahayn Khariidadda bogga ee 'XML', waxaad halis ugu jirtaa boggagaaga si aan waligood loo ogaan. Kawaran haddii aad leedahay bog soo degitaan badeecadeed oo cusub oo aan ku xirnayn gudaha ama dibedda. Sidee Google ku ogaadaa? Hagaag, si fudud u dhig… ilaa xiriiriye laga helayo, lagamana ogaan doono. Waad ku mahadsan tahay, makiinadaha raadinta waxay awood u siinayaan nidaamyada maareynta maadooyinka iyo aaladaha ecommerce inay u fidiyaan rooga casaanka ah iyaga, in kastoo!
Google waxay ogaataa xiriir dibadeed ama mid gudaha ah ee bartaada.
Google wuxuu tusayaa bogga oo wuxuu ku qiimeeyaa hadba sida uu ka kooban yahay iyo waxa ay ka kooban yihiin iyo tayada barta xiriiriyaha tixraaca ah.
Iyadoo la adeegsanayo Khariidadda bogga "XML", ugama tegeysid daahfurka macluumaadkaaga ama cusbooneysiinta mawduucaaga fursad! Inbadan oo horumariyayaashu waxay isku dayaan inay qaataan tuuryo-toobiyeyaal iyaga wax u dhimaya sidoo kale Waxay ku daabacaan isla jeexjeexa hodanka ah bogga oo dhan, iyagoo siinaya macluumaad aan ku habboonayn macluumaadka bogga. Waxay ku daabacaan khariidad bog oo isla taariikho isku mid ah bog kasta (ama dhammaantood la cusbooneysiiyaa markay cusbooneysiiyaan hal-bog), iyagoo safaf u siinaya matoorada raadinta inay ku ciyaarayaan nidaamka ama aan lagu kalsoonaan karin. Ama iyagu ma dhaafayaan makiinadaha wax raadinta… marka mashiinka raadinta ma ogaanayo in macluumaad cusub la daabacay.
Waa maxay Metadata? Microdata? Goos gooska hodanka ah?
Qeybaha hodanka ah ayaa si taxaddar leh loogu calaamadeeyay microdata taasi way ka qarsoon tahay daawadaha laakiin waxay ka muuqan kartaa bogga makiinadaha wax raadinta ama baraha bulshada si looga faa’iideysto. Tan waxaa loo yaqaan metadata. Google wuxuu waafaqayaa Schema.org halbeeg ahaan loogu daro waxyaabaha sida sawirada, cinwaanada, sharaxaada… iyo sidoo kale tiro badan oo macluumaad yar yar oo macluumaad ah sida qiimaha, tirada, macluumaadka goobta, qiimeynta, iwm. Qorshuhu wuxuu si weyn kor ugu qaadayaa muuqaalka mashiinkaaga raadinta iyo suurtagalnimada in isticmaale uu gujin doono iyada oo loo marayo.
Facebook wuxuu adeegsadaa OpenGraph borotokoolka (dabcan isku mid ma noqon karaan), Twitter xitaa wuxuu leeyahay gabal yar oo lagu qeexo astaantaada Twitter. In badan oo ka mid ah meheradaha ayaa isticmaalaya metadata si ay u eegaan xirmooyinka gundhigga ah iyo macluumaadka kale markay daabacayaan.
Bogaggaaga shabakaddu waxay leeyihiin macno aasaasi ah oo dadku fahmayaan markay akhriyaan bogagga shabakadda. Laakiin matoorada raadinta waxay leeyihiin faham xaddidan waxa looga hadlayo bogaggaas. Adoo kudaraya astaamo dheeri ah HTML-ka boggagaaga — astaamaha oranaya, "Hey matoor raadinta, macluumaadkan wuxuu qeexayaa filimkaan gaarka ah, ama meesha, ama qofka, ama fiidiyowga" - waxaad ka caawin kartaa matoorada raadinta iyo barnaamijyada kale inay si fiican u fahmaan waxyaabaha aad ka kooban tahay una soo bandhig qaab waxtar leh, oo ku habboon. Microdata waa astaamo tags ah, oo lagu soo bandhigay HTML5, oo kuu oggolaanaya inaad tan sameyso.
Schema.org, Waa maxay MicroData?
Dabcan, midkoodna looma baahna… laakiin aad baan ugu talinayaa. Markaad la wadaagto xiriiriye Facebook, tusaale ahaan, oo aan sawir, cinwaan, ama sharrax ka soo bixin… dad yar ayaa xiiseynaya oo dhab ahaan riixaya. Hadana hadii jeexjeexyadaada Schema aysan ku jirin bog kasta, dabcan wali waad ka muuqan kartaa natiijooyinka raadinta… laakiin tartamayaasha ayaa kugu garaaci kara marka ay hayaan macluumaad dheeri ah oo la soo bandhigay.
Ku diiwaangeli Qariiradahaaga XML Raadinta Konsol
Waa lagama maarmaan in, haddii aad dhistay mawduucaaga ama barnaamijka ganacsiga, inaad haysato nidaam hoosaadyo ka dhigaya makiinadaha raadinta, daabacaya microdata, ka dibna siinaya khariidad bogga XML oo sax ah oo ku saabsan nuxurka ama macluumaadka alaabta la heli karo!
Mar haddii faylkaaga robots.txt, khariidadaha bogga ee 'XML', iyo jeexjeexyada hodanka ah la habeeyo oo la hagaajiyo dhammaan bartaada, ha ilaawin inaad iska diiwaangeliso raadin kasta oo ah mashiinka raadinta ee Search Console (sidoo kale loo yaqaan 'Webmaster tool') halkaas oo aad kala socon karto caafimaadka iyo aragtida goobta mashiinnada raadinta. Xitaa waad sheegi kartaa wadadaada Khariidadda bogga haddii aan midkoodna liis garayn oo aad aragto sida mashiinka raadintu u cunayo, haddii ay jiraan ama ayan jirin wax arrimo ah, iyo xitaa sida loo saxo.
U rogo roogga gaduud si aad u raadiso matoorada iyo warbaahinta bulshada waxaadna ka heli doontaa darajadaada boggaaga si ka wanaagsan, waxyaabaha aad gelisay ee ku yaal bogagga natiijada mashiinka raadinta ayaa riixday inbadan, bogaggaaguna wax badan ayaa lagu wadaagay warbaahinta bulshada. Dhammaantood way isku darmaan!
Sidee Robots.txt, Khariidadaha bogga, iyo MetaData u wada shaqeeyaan
Isku darida walxahan oo dhami waa wax badan oo la mid ah rogida roogga gaduudan ee bartaada. Waa kuwan geeddi-socodka gurguurta ee bot ay la socoto iyo sida mashiinka raadintu u tuso waxyaabahaaga.
Boggaagu wuxuu leeyahay feyl robots.txt ah oo waliba tixraacaya goobtaada XML Sitemap.
Nidaamkaaga CMS ama nidaamka e-commerce wuxuu cusbooneysiiyaa Khariidadda bogga ee 'XML Sitemap' oo leh bog kasta oo daabacan taariikhda ama wax ka beddel taariikhda macluumaadka.
Nidaamkaaga CMS ama e-commerce wuxuu miiqaa matoorada raadinta si ay ugu wargeliyaan in bartaada la cusbooneysiiyay. Si toos ah waad u jilicsan kartaa ama waxaad isticmaali kartaa RPC iyo adeeg la mid ah Ping-o-matic si loogu riixo dhammaan matoorada raadinta muhiimka ah.
Mashiinka Raadinta isla markiiba wuu soo noqdaa, wuu ixtiraamaa faylka Robots.txt, wuxuu helaa bogag cusub ama la cusbooneysiiyay iyada oo loo marayo khariidadda bogga, ka dibna wuxuu tixraacayaa bogga.
Markay tilmaamayso boggaaga, waxay adeegsataa microdata gaagaaban oo qani ah si kor loogu qaado bogga natiijooyinka mashiinka raadinta.
Maaddaama boggaga kale ee ku habboon ay ku xirmaan waxyaabahaaga, mawduucaagu si fiican ayuu u sarreeyaa
Maaddaama macluumaadkaaga lagu wadaagayo warbaahinta bulshada, macluumaadka kooban ee hodanka ah ee la cayimay ayaa gacan ka geysan kara si habboon u-eegidda waxyaabahaaga oo u tilmaamaya astaantaada bulshada.
Tags: ecommerce caadada ahsida loonidaamkafaylka robots.txtshemaraadinta qalabkaistaandarka maabkakhariidada bogga xml
Nov 3, 2020 at 3: 47 AM
degelkeygu ma awoodo inuu muujiyo waxyaabo cusub, waxaan ka rabaa khariidada mareegaha iyo url-ka webmaster-ka laakiin wali ma awoodo inuu tan hagaajiyo. Ma google backend dhibaato?
Nov 3, 2020 at 7: 50 AM
Caadi ahaan maahan, waa maxay cinwaankaagu? Waxaan hayaa qalab aan ku falanqeyn karo bartaada.